तपाईंको फेसबुक प्रोफाईल सफा गर्नुहोस्, तपाईंको छविको लागि सोशल नेटवर्कको महत्त्व बुझ्नुहोस्।
द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | अक्टोबर 8, 2018 | कार्यालय
सामाजिक नेटवर्कहरू अहिले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको लागि रोजगारीको जीवनको ठूलो भाग हुन्। तिनीहरू घरका नजिकका घटनाहरू जान्न खबरहरू पछ्याउनका लागि हाम्रो रिश्तेदारहरू (साथीहरू र परिवार )सँग सम्पर्क राख्न प्रयोग गरिन्छ। तर पनि नौकरी खोज्न पनि। यसैले सोशल नेटवर्क मार्फत वेबमा हाम्रो क्रियाकलापमा ध्यान दिनको लागि यो राम्रो छ। उम्मेद्वारको विचार प्राप्त गर्नको लागि फेसबुक प्रोफाईल भ्रमण गर्न भविष्यमा भर्खरको लागि असामान्य छैन, राम्रो छाप बनाउने महत्त्वपूर्ण छ, तर तपाईंको फेसबुक गतिविधि सबैको लागि उपयुक्त नहुन सक्छ।
एक अतीत को सफाई, दायित्व?
तपाईंसँग आफ्नो पुरानो सामग्री मेटाउन छैन, वा फेसबुक वा अन्यमा सामाजिक सञ्जाल। केही वर्ष अघि तपाईंको गतिविधिको सम्झनाहरू राख्नको लागि यो सामान्य छ। तर यसको मतलब भनेको तपाईं अलर्ट रहनु पर्दैन। निस्सन्देह, यदि तपाईं शंकास्पद पदहरू छन् भने, उनीहरूलाई राख्नको लागी जोखिमपूर्ण छ किनभने कोही कोही तपाईंको प्रोफाइलबाट उनीहरूको पतन हुन सक्दछ। तपाईंको व्यक्तिगत जीवनले पनि तपाईंको व्यावसायिक जीवनको सामना गर्न सक्छ। यसैले घुसपैठ विरुद्ध सुरक्षाको लागि प्रभावकारी सफाई गर्न सल्लाह दिइन्छ।
यदि तपाईं मध्ये केहि आफु प्रतिरक्षा मा विचार गर्दछ, किनकि कष्टप्रद प्रकाशन धेरै वर्ष पुराना छ, थाहा छ कि 10 वर्ष पछि पनि, एक प्रकाशन नकारात्मक परिणाम हुन सक्छ। निस्सन्देही, यो यो देख्न को लागि एकदम सामान्य छ, किनकि हामी सामाजिक सञ्जालमा सजिलै संग मजाक गर्दैनौं, कुनै अस्पष्ट शब्द चाँडै तपाईंको प्रतिष्ठा विनाशकारी हुन सक्छ। सार्वजनिक तथ्याङ्कहरू पहिलो चिन्तित छन् किनभने अखबारहरू धम्कीहरू सिर्जना गर्न पुराना प्रकाशनहरू निकाल्न संकोच गर्दैनन्।
रिड PowerPoint गति एनिमेसन ट्यूटोरियल
यसकारण यो तपाईंको पुरानो फेसबुक प्रकाशन बाट एक कदम फिर्ता लिन कडा सल्लाह छ, यसले तपाइँलाई पहिले आफ्नो र जीवनको बीचमा सफा गर्न अनुमति दिन्छ। यो प्रोफाइल ब्राउज गर्न अधिक मनोरञ्जन र सरल हुनेछ यदि समय अंतर धेरै ठूलो छैन।
आफ्ना प्रकाशनहरू, सरल वा जटिल सफा गर्नुहोस्?
यदि तपाइँ आफ्नो प्रोफाइल सफा गर्न सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँसँग तपाईको आवश्यकता अनुसार अनुसार विभिन्न समाधानहरू छन्। तपाईं आफ्नो प्रोफाईलबाट मेट्ने पोष्टहरू मात्र चयन गर्न सक्नुहुन्छ; तपाईसँग शेयरहरू, फोटोहरू, नियमहरू, आदिको पहुँच हुनेछ। तर यो कार्य धेरै लामो हुनेछ यदि तपाईं ठूलो मेटाउने बनाउन चाहनुहुन्छ, र तपाइँ तपाइँको छान्ने क्रममा केही प्रकाशनहरू देख्न सक्नुहुन्न। सबै भन्दा व्यावहारिक चीजहरू तपाईंको विकल्पहरू पहुँच गर्न र व्यक्तिगत इतिहास खोल्नु हो, तपाईंसँग अनुसन्धानका साथै थप विकल्पहरूमा पहुँच हुनेछ जुन उदाहरणको लागि जहाँ तपाइँ जोखिम बिना सबै चीज मेटाउन सक्नुहुनेछ। तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत इतिहास को टिप्पणी र उल्लेख सहित "मेट्न", वा पहिचानहरू, वा तपाईंको प्रकाशनको मेट्न पनि पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको विकल्पबाट ठूलो मेटाउन सम्भव छ, तर यो सबै एक लामो समय हुनेछ। यस्तो अपरेसन भन्दा पहिले आफैंलाई साहस राख्नुहोस्, तर जान्नुहोस् कि तपाइँ यसलाई तपाइँको कम्प्युटर, ट्याब्लेट वा स्मार्टफोन बाट धेरै व्यावहारिक बनाउनु सक्नुहुन्छ।
छिटो जानको लागि उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्
यो धेरै सामान्य छ कि आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल मेटाउन धेरै डेटा छैन, तर यसको मतलब यो होइन कि कार्य चाँडै हुनेछ, धेरै विपरीत। यदि तपाइँ केही वर्षको लागि यो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, संकलन महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यस अवस्थामा, सफा उपकरणको प्रयोग धेरै उपयोगी हुन सक्छ। क्रोम एक्सटेन्सनले सामाजिक बुक पोस्ट प्रबन्धकलाई तपाईंलाई कुशल र छिटो हटाउने विकल्पहरू प्रदान गर्न तपाईंको फेसबुक प्रोफाइलको गतिविधि प्रशोधन गर्न अनुमति दिन्छ। एकपटक तपाईंले आफ्नो गतिविधि विश्लेषण गर्नुभएपछि, तपाईं कीवर्ड द्वारा मेटाउन सक्नुहुनेछ र यसले तपाईंलाई प्रभावकारी परिणामको लागि धेरै समय बचत गर्नेछ।
रिड Google गतिविधि, वा तपाईंको गतिविधिको बारेमा Google र त्यसको विभिन्न सेवाहरूसँग सम्बन्धित सबै कुरा थाहा पाउनुहोस्।
तपाईले निःशुल्क फेसबुक पोस्ट प्रबन्धक अनुप्रयोग रोज्न सक्नुहुन्छ जुन धेरै छिटो सेट गरिएको छ। यस उपकरणबाट, तपाईंले वर्ष वा यहाँका महिनाहरू चयन गरेर आफ्नो प्रकाशनहरू छिट्टै छिर्न सक्नुहुन्छ। एक पटक विश्लेषण पुरा भएपछि, तपाइँसँग तपाइँको पर्खालमा र तपाईंको साथीहरू, फोटाहरू, साझेदारीहरूमा तपाईंका मनपर्नेहरू, टिप्पणीहरू, प्रकाशनहरूमा पहुँच हुनेछ ... तपाईहरू मेटाउन चाहानुहुन्छ जुन तपाइँ मेट्न चाहानुहुन्छ वा रोज्नुहोस्। कुल दमन अनुप्रयोगले यो स्वचालित रूपमा गर्नेछ, त्यसैले तपाईंले प्रत्येक समय-उपभोग प्रकाशनमा म्यानुअल रूपमा मेट्ने छैन।
यस प्रकारका उपकरणहरूको साथ, अब तपाइँ अस्पष्ट वा सम्झौता प्रकाशनहरूको बारे चिन्ता गर्नुहुने छैन जुन दुर्भावनापूर्ण व्यक्तिले खराब समयमा फेला पार्न सकिन्छ।
सामाजिक सञ्जाल र आफ्नो प्रोफाईलको महत्त्वलाई कम नदिनुहोस् जुन तपाईले आफ्ना प्रियजनहरूलाई फिर्ता पठाउने छविलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, तर तपाईंको व्यावसायिक वातावरणमा पनि।
केहि वर्ष पछि कट्टरपन्थी सफाईबाट बच्न, तपाइँ सोशल सञ्जालहरूमा के पोष्टमा ध्यान दिनुहोस्। फेसबुक एक पृथक मामला होइन, हरेक शब्दले सकारात्मक र नकारात्मक दोहोर्याउन सक्छ र सामग्री मेटाउन सँधै एक समयमै समाधान छैन। के मजाकिया र निर्दोष जस्तो लाग्न सक्छु जरूरी भविष्य भविष्य प्रबन्धक को लागी हुने छैन जुन खराब स्वादमा रहेको तस्वीरमा पतन हुनेछ। प्रत्येक प्रयोगकर्ताले आफ्नो गोपनीयता विकल्पहरू सेट गर्न निश्चित गर्न, सम्पर्कहरू थप्नुहुन्छ, र फेसबुकमा आफ्नै गतिविधिको अनुगमन गर्नुहोस्। गल्ती गर्नु अघि कारवाही गर्ने एक प्रभावकारी समाधान समस्याबाट टाढा छ।
यदि, तथापि, तपाईले गल्ती गर्नुहुन्छ, तपाईंको सामग्री कुशलतापूर्वक र चाँडो मेटाउन विकल्पहरूमा जानुहोस् जब तपाई उपकरणमा जान नसक्नु भएको बेला सम्झौता पोष्टहरू तान्नुहोस्।
रिड अफिस स्वचालनमा विकास गर्न प्रमुख कुञ्जी
तपाईंको फेसबुक प्रोफाईल सफा गर्नु यसकारण आवश्यक छ किनकि यो अन्य सोशल नेटवर्कको लागि हो। त्यहाँ यो बोरिंगमा धेरै आवश्यक कार्यमा साथसाथै छिटो र कुशलतापूर्वक क्रमबद्ध गर्न उपकरणहरू छन्। वास्तवमा, आज सामाजिक सञ्जालको महत्त्वले सबैको आँखामा विस्थापित फोटोहरू वा शंकास्पद मजाकहरू छोड्न अनुमति दिन्छ। एक प्रोजेक्ट म्यानुअलले प्राय: फेसबुकको बारेमा एक उम्मेद्वारको प्रोफाइल हेर्न र उनीहरूले नकारात्मक पाउने कुनैपनि तत्वलाई पत्ता लगाउन सक्नेछ जुन तपाईले यो तत्व दस वर्षको उमेरमा समेत भर्तीको संभावना गुमाउन सक्छ। तपाईं चाँडै बिर्सनुहुनेछ जुन फेसबुकमा रहनु हुनेछ जब सम्म तपाइँ सफा गर्दैनौं र यो राम्ररी थाहा छ कि इन्टरनेटले कहिल्यै बिर्सदैन।
तपाईंको फेसबुक प्रोफाईल सफा गर्नुहोस्, तपाईंको छविको लागि सोशल नेटवर्कको महत्त्व बुझ्नुहोस्। अगस्ट 25th, 2020Tranquillus
अघिल्लोतपाईंको चहचहाना प्रोफाइल सफा गर्ने र तपाईंको छविको संरक्षण कसरी गर्ने?
निम्नGoogle गतिविधि, वा तपाईंको गतिविधिको बारेमा Google र त्यसको विभिन्न सेवाहरूसँग सम्बन्धित सबै कुरा थाहा पाउनुहोस्।
अफिस स्वचालनमा विकास गर्न प्रमुख कुञ्जी